फुटबल मैदानकाे महायुद्ध, उपाधिकाे प्यास, बदलाकाे जाेस, सबैकाे ताराे मेस्सी नै ! | | Neplays.com
फुटबल मैदानकाे महायुद्ध, उपाधिकाे प्यास, बदलाकाे जाेस, सबैकाे ताराे मेस्सी नै !
By Neplays	 Last updated Jun 30, 2019
दक्षिण अमेरीकी फुटबल प्रतियोगता कोपा अमेरीकाको सेमिफाइनलमा विश्व फुटबलका दुई महारथी ब्राजिल र अर्जेन्टिना विच भिडन्त हुने भएको छ । क्वाटरफाइनलमा ब्राजिल र अर्जेन्टिनाले जित निकालेपछि यी दुई पावरहाउस टिम सेमिफाइनलमा उत्रने पक्का भएको हो । यसको अर्थ यसपटकको कोपा अमेरीकाको फाइनलमा दुई मध्ये एक टिम नपुग्ने पक्का भएको छ । १२ बर्षपछि कोपा अमेरीकामा एक अर्का विरुद्ध खेल्न लागेका यी दुई टिममा कसले बाजी मार्ला भन्ने दुबै टिमका समर्थकमाझ कौतुहल बढिसकेको छ ।
ब्राजिलको घरेलु मैदानमा अर्जेन्टिनाले जुन किसिमले प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको थियो, त्यो हेर्दा ब्राजिल हावी हुने देखिन्छ । प्रतियोगितामा ब्राजिलले समुह चरणमा अपराजित रहदै नकआउट चरणमा पुगेको थियो । त्यसपछि क्वाटरफाइनलमा पेनाल्टीबाट जित निकालेको ब्राजिल विरुद्ध कुन रणनितीका साथ उत्रने हो त्यो भने हेर्न बाँकि छ ।
अर्जेन्टिना समुह चरणमा निकै धुकधुक हुँदै नकआउट चरणमा पुगेको थियो । उसले कोलम्बियासँग पराजित हुँदा पाराग्वेसँग एक एकको बराबरी खेलेको थियो । तर समुहको अन्तिम खेलमा कतारलाई दुई शुन्यले हराएपछि उसका क्वाटरफाइनलको यात्रा पक्का भएको थियो । क्वाटरफाइनलमा भने उसले भेनेजुयलालाई दुई शुन्यले हराएको थियो ।
अब अर्जेन्टिना र ब्राजिलको भिडन्तका लागि विश्वका सबै फुटबल प्रेमीको एक दशकको कुराई रहेको छ । २००७ को कोपा अमेरीकाकै फाइनलमा यी दुई टिम खेलेपछि त्यसपछि यो प्रतियोगितामा अरु बेला आमनेसामने भएका थिएनन् । तर अरु प्रतियोगिताहरुमा भने दुई टिम १३ पटक खेलेका थिए । जसमा ठुलो प्रतियोगिता भनेको फिफा विश्वकपमा चार पटक खेलेका थिए । जसमा ब्राजिल नै हावी भएको थियो ।
अमेरीकी सञ्चार माध्यम सीएनएनले ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको खेललाई विश्व फुटबलमा दोस्रो ठुलो महाभिडन्तका रुपमा लिएको छ । विश्व फुटबलमा इंग्ल्याण्ड र स्कटल्याण्ड विचको भिडन्तलाई शिर्ष स्थानमा राखेको छ ।
१९१४ बाट सुरु भएको यी दुई टिमको दुस्मनी एक सय भन्दा बढि खेलमा पुग्दापनि उस्तै रहेको छ । ब्राजिल र अर्जेन्टिना खेल्ने भनेपछि विश्व फुटबलका समर्थकहरु आफ्नो निन्द्रालाई गुमाएर भएपनि हेर्ने गर्छन । यस्तै अवस्था फेरी आएको छ ।
ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको फुटबल राइभ्लरी सुरु भएको एक सय ५ बर्ष भएको छ । जसमा यी दुई टिमले अहिलेसम्म एक सय नौ खेल खेलका छन । विश्व फुटबलमा स्टार खेलाडी जन्माउने दुबै देश अहिलेसम्म खेल्दा हेड टु हेडमा अर्जेन्टिना अगाडी रहेको छ । उसले कुल ४५ खेल जितेको छ । भने ब्राजिलले ३९ खेलमा विजयी भएको छ । २५ खेल बराबरी भएका छन ।
अहिलेसम्म अर्जेन्टिनाले ब्राजिलमाथि ठुलो मार्जिनको जित निकालेको ६–१ को रहेको छ । जुन १९४० मा कोपा जुलिया रोकामा हात पारेको थियो । यस्तै उसले ब्राजिल विरुद्ध हात पारेको ठुलो हार भनेको ५–१ को रहेको छ । जुन १९६० जुलाई १२ मा भएको कोपा डेल एट्लाटिकोमा हात पारेको थियो ।
अन्तिम पटक विश्वकपमा यी दुई टिम दुई पटक खेलका थिए, जसमा एक खेलमा ब्राजिल तीन शुन्यले विजयी भएको थियो भने एक खेल एक एक गोलको बराबरीमा सकिएको थियो । त्यसपछि २०१८ अक्टोबर १६ मा अन्तिम पटक सुपरक्लासिको डे लास अमेरीकामा खेल्दा ब्राजिल एक शुन्यले विजयी भएको थियो ।
सन् २००७ को फाइनलमा तीन शुन्यले हारेको अर्जेन्टिना लगातार तेस्रो पटक फाइनलमा पुग्ने मौका रहेको छ भने दुई दशक भन्दा बढि समयको उपाधिको खडेरी तोड्ने मौका पनि रहेको छ ।
पछिल्ला पाँच वटा संस्करणमा चार पटक फाइनलमा पुगेको अर्जेन्टिना जहिलेपनि फाइनलमा पराजित भएको थियो, यता यो विचमा दुई पटक फाइनलमा पुग्यो र दुबै पटक विजेता बन्यो । दुबै पटक उसले फाइनलमा अर्जेन्टिनालाई हराएको थियो ।
चार पटक नै फाइनलमा पराजित हुँदा लियोनल मेसी जहिले आलोचक बनेका थिए । अब यसपटक के उनले आफ्ना आलोचकको मुख बन्द गर्लान वा फेरी पनि आलोचना नै सुन्नुपर्ने हो त्यो आउदो बुधबार विहान थाहा हुनेछ । बुधबार विहान सवा ६ बजे हुने यो खेल दक्षिण एशियाली समर्थक भने हेर्न पाउने छैनन् । किनकी दक्षिण एशियामा कोपा अमेरीकाको टेलिभिजन राइट्स कसैलेपनि किनेका छैनन् ।
दर्शक, बिदेशी पत्रकार, प्रत्यक्ष प्रशारण र गाेल पनि नभएकाे गाेप्य खेल
स्वारेज बिनाकाे उरूग्वेले पेरूसँग बराबरी खेल्याे
मैत्रीपुर्ण खेलमा डेनमार्क विजयी हुँदा काेलम्बिया पराजित
विश्वकप छनाेटमा कतार विजयी हुँदा इरान पराजित
युनाईटेडका गोलकिपर डेवीडले लिभरपुल विरुद्धको खेल गुमाउन सक्ने
स्पेन यूराेकपमा स्थान बनाउन सफल, इट्लीकाे सहज जित
ओमानको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमबाट खेल्ने नेपाली, जसले नेपाललाई नै…
बनाएकाे याेजनामा चुक्दा हार्नुपर्याे-प्रशिक्षक पटवाल
पारसले कप्तानी छाेडेकाेमा पुबुदुकाे यस्ताे प्रतिकृया
कप्तान पदबाट राजीनामा दिएपछि पारस यसरी खुले…
पारसको राजीनामा पछि सन्दीपले के भने त?
© Copyright 2019 - Neplays Media Management Pvt. Ltd. All Rights Reserved.